Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) - Hello Sayarwon
Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း )
Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) ကဘာလဲ။
လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လူတိုင်း ဖြစ်နိုင်သော ကျန်းမာရေး ပြသနာဖြစ်ပါသည်။ သာမန်အခြေအနေမှသည် အလွန် ပြင်းထန်သော အခြေအနေ အထိ ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ယင်းလက်ချောင်း တစ်ချောင်းလုံး အလုပ်မလုပ်တော့ သည်အထိ ဖြစ်ပွားနိုင် ပါသည်။ လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းတွင် ဖြစ်ပွားသော နေရာ၊ ဖြစ်ပွားသော အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
လက်စွယ်ငုတ်ခြင်း။ လက်စွယ်ငုတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လက်သည်း၏ ဘေးအသားများတွင် ပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အရေပြား အပေါ်လွာတွင်သာ ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းတွင် အတွေ့ရ အများဆုံး အခြေအနေပင်ဖြစ်ပါသည်။
Felon။ Felonဆိုသည်မှာ လက်ချောင်းထိပ်တွင် ပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းနေရာရှိ အသားများ၊ တစ်ရှုးပျော့များ ပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Herpetic whitlow။ ဤအခြေအနေ သည်လည်း လက်ချောင်းလေးများ၏ ထိပ်တွင်သာ ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများတွင် အတွေ့ရ အများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအခြေအ နေမှာ လက်စွယ်ငုတ်ခြင်းနှင့် Felonတို့နှင့် မှားယွင်းနိုင်ပါသည်။
တစ်ရှုးရောင်ရမ်းခြင်း။ တစ်ရှုးရောင်ရမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ အရေပြား အပေါ်ယံလွာနှင့် အောက်ခံ တစ်ရှုးသားတွင် ပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် ကြွက်သားလွာ အထိမရောက်တတ်ပါ။
အရွတ်နှင့် အဆစ်များ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း။ လက်ချောင်းလေးများ ကွေးခြင်း နှင့် လက်သီးဆုပ်ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်သော အဆစ်များနှင့် အရွတ်နေရာများ အထိ ပိုးဝင်ပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ပင်ကိုယ် ကိုယ်ခံအားနည်းနေသော လူများတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
လက်ချောင်း အတွင်းဆုံးလွာများထိ ပိုးဝင်ခြင်း။ အရွတ်များ၊ သွေးကြောများ၊ အတွင်းသားများအထိ ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်နေရာတည်းမကဘဲလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး သင့်ပါတယ်။
Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသလိုပင် လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းတွင် အမျိုးအစား များစွာရှိသောကြောင့် တစ်မျိုးခြင်းစီတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်သော လက္ခဏာများ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
လက်စွယ်ငုတ်ခြင်း။ လက်စွယ်ငုတ်ခြင်းတွင် ရောင်ခြင်း၊ နီခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပြီး ပြည်တည်နာလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ ပြည်တည်ခြင်းကို လက်သည်းဘေးနှင့် အသားကြားတွင် တွေ့ရနိုင်ပြီး အထိမခံနိုင်လောက်အောင် နာကျင်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Felon။ Felon တွင် လက်ထိပ်ဖုဖောင်းပြီး နာကျင်မှု့ရှိနေ နိုင်ပါသည်။ တစစ်စစ်ကိုက်ခဲမှု့ နှင့်အတူ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နိုင်ပြီး ပြည်တည်သည် အထိလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖုဖောင်းနေသော နေရာကို စမ်းကြည့်ပါက ပြည်ရှိနေလျင် ခပ်ပျော့ပျော့ ဖြစ်နေမည် ဖြစ်ပြီး အချိန်ကြာ ပါက အသားမာတက်ပြီး မာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Herpetic whitlow။ လက်ချောင်းလေးများ ထိပ်တွင် နီခြင်း၊ နာခြင်းနှင့် ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်ခြင်းတို့ အပြင် တစ်ခါတစ်ရံ ယားယံနိုင် ပါသည်။ Felon ကဲ့သို့ ဖုဖောင်းလာနိုင်သော်လည်း Felon လောက် ဆိုးရွားခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် အနာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အနာများစွာ ပေါက်နိုင်ပါသည်။ ယင်းအနာလေးများ စုပေါင်းလာပြီး အရည်ကြည်ဖုကဲ့သို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကိုယ်ပူနိုင်သလို ယင်းလက်ချောင်းနှင့် ဆက်ဆပ်နေသော နေရာများတွင် ပြန့်ရည်ကြော အကျိတ် ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
တစ်ရှုးရောင်ရမ်းခြင်း။ ဖြစ်ပွားသော အရေပြားနေရာတွင် နီရဲနေပြီး ပုံမှန် အသား အရေထက်နွေးနေနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ် ဖုဖောင်းနေပြီး နာနိုင်ပါသည်။ အတွင်းအသားများ ထိခိုက်မှု့ မရှိခြင်းကြောင့် လှုပ်ရှားမှု့များ ကြောင့် နာကျင်ခြင်း မရှိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ လှုပ်ရှားမှု့တွင် အတွင်းမှ နာကျင်ခြင်းရှိနေပါလျင် အခြားရောဂါ အခြေအနေကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
အရွတ်နှင့် အဆစ်များ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း။ ဤရောဂါအခြေအနေတွင်မူ Kanavel cardinal signs ဟုခေါ်သော ရောဂါလက္ခဏာ လေးမျိုးကို တစ်ခုချင်းသော်၎င်း၊ လေးမျိုးစလုံး တပြိုင်နက်သော်၎င်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၁။ လက်ဖဝါးဘက်ခြမ်းတွင် နာကျင်ခြင်း
၂။ လက်ချောင်း တစ်ခုလုံးဖူးယောင်လာခြင်း
၃။ လက်ချောင်းများကို ဆန့်လျင်နာကျင်ခြင်းနှင့် မကွေးနိုင်တော့ခြင်း
၄။ နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်မူ အနည်းငယ်ကွေးသော အနေအထားဖြင့်သာ နေ၍ရတော့ခြင်း
လက်ချောင်း အတွင်းဆုံးလွာများထိ ပိုးဝင်ခြင်း။ အတွင်းဆုံးလွာများတွင် ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ပြည်တည်ကာ ယင်းပြည်နာသည် အပေါ်ယံအရေပြားကို ဖေက်ထွက်သော အနာဖြစ်လာပါသည်။ ယင်းအနာကို collar button abscess ဟု ခေါ်ပါသည်။ ယင်းအနာသည် အပေါ်ယံ အရေပြားအထိ ပေါက်ထွက်တတ်ပါသည်။ မပေါက်ထွက်ခင်တွင် အတွင်းတွင် အနာရှိသော နေရာသည် နီရဲရောင်ရမ်းကာ နာနေပါမည်။ ထိကြည့်ပါက ပြည်များရှိနေပါက ပျော့နေပါမည်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသော လက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုများ ရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေ မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှ လက္ခဏာတစ်ခုခု ခံစားနေရရခြင်း ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခု ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပါ။ သို့မှသာ သင်သည်အကောင်းဆုံး အဖြေကို ရရှိနိုင်ပါမည်။
Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဗိုင်းရပ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သော herpetic whitlow မှလွဲ၍ အဓိက ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ ဘက်တီးရီးယား ပိုးများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးဝင်ခြင်းတွင် အောက်ပါ ထိမိခိုက်မိသော အကြောင်းအရင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ရှမိခြင်း၊ ဖိကြိတ်မိ ခြင်း၊ စုတ်ပြဲဒဏ်ရာရခြင်း၊ လက်သည်းအရင်းတွင် ပိုးဝင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များ ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ထုတ်ချင်းပေါက် ဒဏ်ရာရခြင်း။
သို့သော် ဖြစ်စေသော ရောဂါ တစ်မျိုးစီတွင် ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ မတူညီသဖြင့် ရောဂါတစ်ခုချင်းအလိုက် အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။
လက်စွယ်ငုတ်ခြင်း။ အများအားဖြင့် staphylococcal နှင့် streptococcal ဘက်တီးရီးယားပိုးများကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ မှိုပိုးကြောင့် ဆိုပါက ကာလရှည် ဖြစ်ပွားတတ် ပါသည်။ လက်သည်း ထောင့်အစွန်းများကို အလွန်တိုအောင် ညှပ်ပစ်ပါက ယင်းလက်သည်းဘေး အသားများကို ပိုးဝင်နိုင်ပြီး ယင်းမှာ လက်သည်းဘေး အနားမှ လက်သည်းဘေး အရင်းအထိ ပြန့်နှံနိုင်ပါသည်။ ထိုမှသည် လက်သည်း ပတ်ချာလည်ကို ပြန့်နှံစေ နိုင်ပါသည်။
Felon။ လက်စွယ်ငုတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေသော ဘက်တီးရီးယားများ ကြောင့် ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်ထိပ်အသားတွင် ဖြစ်ပွားပါသည်။ အများအားဖြင့် အသားကို ဖောက်သွားသော ဒဏ်ရာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး အခြားလက်ချောင်း အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ပြန့်နှံစေပါသည်။
Herpetic whitlow။ ဟားပီးဗိုင်းရပ်များ ( herpes simplex virus ) ကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး ယင်းဗိုင်းရပ်သည် ပါးစပ်နှင့် လိင်အင်္ဂါတွင်လည်း အနာများဖြစ်ပွားစေပါသည်။ အချို့လူများတွင် အလုပ်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်ပါသည်။ ဥပမာ။ သွားဆရာဝန်များ၊ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့် တံတွေးနှင့် အခြားသော လူ့ခန္ဓါကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်များကို ကိုင်တွယ်ရသူများ တွင်လည်း ကူစက်နိုင်ပါသည်။ အချို့လူများတွင်လည်း မိမိခံတွင်းနှင့် လိင်အင်္ဂါမှ တစ်ဆင့် မိမိလက်ကို ပြန်လည်ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
တစ်ရှုးရောင်ရမ်းခြင်း။ staphylococcal နှင့် streptococcal ဘက်တီးရီးယားပိုးများကြောင့်သာ ဖြစ်ပွားပြီး အရေပြားပွင့်သွားသော အနာများကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း သွေးထဲတစ်ဆင့် လက်ချောင်းများဆီသို့ ပိုးများ ရောက်ရှိ လာတတ်ပါသည်။
အရွတ်နှင့် အဆစ်များ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း။ အရွတ်အဖုံးလွာများအထိ ရောက်ရှိစေသော အနာတရဖြစ်မှု့များကြောင့် ပိုးဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အရွတ်များနှင့် အရွတ်ဖုံး အလွာများတစ်လျောက် ပိုးကူးစက်တတ်ပါသည်။
လက်ချောင်း အတွင်းဆုံးလွာများထိ ပိုးဝင်ခြင်း။ အတွင်းအသားလွာများအထိ ထိခိုက်သော ဒဏ်ရာများကြောင့် ပိုးဝင်နိုင်ပြီး ပြည်တည်နိုင်ပါသည်။ ပြည်ပမာဏ များလာပြီး ပြင်ပသို့ ပေါက်ထွက်ခြင်း မရှိပါက အတွင်းတွင် ဖိအားများလာပြီး အခြားလက်ချောင်း အတွင်းများအထိ ပြန့်နှံနိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဖြစ်ပွားစေသော အကြောင်းအရာများစွာ ရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့မှာ
ထိုးသွင်းဒဏ်ရာများ၊ နက်သော ရှနာများ၊ အရေပြားပွင့်သွားသော အနာများ၊ လက်သည်းကို အလွန်တိုအောင် လှီးဖြတ်ခြင်း၊ အသာမာများကို လှီးဖြတ်ခြင်း၊ လက်သည်းကိုက်ခြင်း၊ စနစ်မကျသော လက်သည်းအလှပြင်ခြင်း။
အချို့ရောဂါဝေဒနာရှင် များတွင်လည်း လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ။ ဆီးချိုလူနာများ၊ ကိုယ်ခံအား အလွန်ကျဆင်း နေသူများ၊ အချို့ဝန်ထမ်းများ (သွားဆရာဝန်များ၊ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ စသည့်)၊ ရေနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိတွေ့ရသူများ (ပန်းကန်ဆေး သမားများ စသည့်)
Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါရာဇဝင် မေးမြန်းခြင်းနှင့် လိုအပ်သော စမ်းသပ်မှု့များ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ တိကျသော မေးခွန်းများကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ရောဂါကို တိကျစွာ အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ လက်ချောင်း တစ်နေရာထဲတွင် ဖြစ်ခြင်းနှင့် နာတာရှည် (သို့မဟုတ်) ပိုမိုပြင်းထန်သော ရောဂါ အခြေအနေများတွင် ကုသမှု့ပုံစံ မတူသောကြောင့် ရောဂါကို သေချာစွာ အတည်ပြုရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အတူ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးကြောရောဂါများနှင့် တွဲ၍ဖြစ်နေသော လူနာများ အတွက်လည်း ကုသပုံများ ကွဲပြားနိုင်ပါသေးသည်။
ရောဂါရာဇဝင် မေးမြန်းခြင်းတွင် ဆရာဝန် အနေဖြင့် ရောဂါစဖြစ်သောပုံစံ၊ စဖြစ်သော အချိန်၊ နေရာ၊ ဒဏ်ရာအတွင်း ပြင်ပပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်နိုင်ခြေ ရှိမရှိ၊ ဆရာဝန်ထံ မရောက်မီ ဒဏ်ရာကို မိမိဘာသာ ဆေးထည့်ခြင်း/ ဆေးကြောထားခြင်း ရှိမရှိ၊ ေနောက်ဆုံးအကြိမ် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသောရက်/လ/နှစ်၊ ယခုထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသောနေရာတွင် ယခင်ထိခိုက် ခဲ့ခြင်းရှိမရှိ၊ လူနာအနေဖြင့် မပြောပြရသေးသော အခြားကျန်းမာရေး ပြဿ နာများ ရှိမရှိ စသည်ဖြင့် မေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ရောဂါတစ်မျိုးစီ အတွက် တိကျသော မေးခွန်းများ မေးမြန်းပါမည်။
ဥပမာ။ လက်စွယ်ငုတ်ခြင်းတွင် လက်သည်းကိုက်တတ်သော အကျင့် ရှိမရှိ၊ Felon တွင် ဆူးစူးခြင်းကဲ့သို့ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် ရှနာ ရှိမရှိနှင့် ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး ဒဏ်ရာအတွင်း ပြင်ပ ပစ္စည်း ဝင်ရောက်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
Herpetic whitlow တွင် ဟားပီးဗိုင်းရပ် ပါရှိနိုင်သော ခန္ဓါကိုယ်မှ ထွက်သည့် အရည်များနှင့် ထိမိထားခြင်း ရှိမရှိ၊ ပေါက်သောအနာ များသည် ဟားပီးဗိုင်းရပ်ကြောင့် ဖြစ်သော အနာများနှင့် တူမတူ ကြည့်ရှု့နိုင် သကဲ့သို့ပင် အနာမှထွက်သော အရည်သည် ကြည်နေပါက ဗိုင်းရပ်ပိုးကြောင့် ဟုပြောနိုင်သကဲ့သို့ Tzanck smear ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း မှလည်း အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။
တစ်ရှုးရောင်ရမ်းခြင်း ရောဂါကို အတည်မပြုမီ အရေပြား ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အခြား အခြေအနေများ ( ဥပမာ။ ဂေါက်ရောဂါ၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ ပျားတုတ်ခြင်း၊ အပူလောင်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်း) ကို ခွဲခြားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ဖြင့်လည်း အရေပြားအောက်တွင် ပြင်ပပစ္စည်းရှိနေ မနေနှင့် လေခိုနေခြင်း များကို တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သော တစ်ရှုးရောင်ရမ်းခြင်းကို အတည်ပြု နိုင်ပါသည်။
အရွတ်နှင့် အဆစ်များ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်းတွင် ထိခိုက်ရှနာနှင့် ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာ ရှိမရှိ၊ ကနဦးတွင် ဖော်ပြထားသာ လက္ခဏာ လေးမျိုး ရှိမရှိ သေချာစွာ မေးမြန်း စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ရောဂါကို အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဂနိုရောဂါနှင့် ဆက်စပ်သော ရောဂါများတွင်လည်း ဤလက္ခဏာများ ရှိတတ်သဖြင့် သေချာစွာ ခွဲခြားနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
လက်ချောင်း အတွင်းဆုံးလွာများထိ ပိုးဝင်ခြင်း။ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာနှင့် အခြား ဒဏ်ရာများ ရှိမရှိ မေးမြန်းခြင်းသည် အရေးကြီးသကဲ့သို့ လက်ချောင်းများ ကြား ဖောင်းနေခြင်း ရှိမရှိနှင့် ပြည်တည်နာပေါက် ရှိမရှိကို စမ်းသပ်ရပါမည်။
Finger Injury (လက်ချောင်းထိခိုက်ခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းကို အဓိကအားဖြင့် ပိုးသတ်ဆေး သောက်ဆေးများနှင့် သင့်တော်သော အနာဆေးထည့်နည်းများကို အသုံးပြု၍ ကုသပါသည်။ သင့်တော်သော အနာဆေးထည့်နည်းများတွင် အနာကို ခွဲ၍ ပြည်ထုတ်ခြင်းမှသည်၊ ပိုးဝင်စေသော ပြင်ပပစ္စည်းများဖယ်ရှားခြင်း များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အချို့လူနာများကို ပြင်ပလူနာ အနေဖြင့်သာ ကုသ နိုင်သော်လည်း အချို့သော ပြင်းထန်လူနာများကိုမူ အတွင်းလူနာ အနေဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးများ ဆေးထိုးဆေးသွင်း ကုသရပါမည်။
လက်စွယ်ငုတ်ခြင်း။ အများအားဖြင့် အနာကို ခွဲခန်းသုံး ဓါးလေးဖြင့်သာ ခွဲထုတ်ပြီး ပြည်ကိုထုတ်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြည်တည်သည့် ပမာဏ ကြီးမားပါက လက်သည်းအစိတ်အပိုင်း အချို့ကိုပါ ထုံဆေးပေးခြင်း၊ ဖြတ်ထုတ်ခြင်း တို့ကို လိုအပ်သလို ကုသမှု့ ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ပိုးသတ်ဆေး သောက်ဆေးပေးပြီး ဆေးထည့်ပုံထည့်နည်း သင်ပေးကာ အိမ်ပြန်နားခိုင်းပါလိမ့်မည်။
Felon။ လက်ချောင်းထိပ် များတွင်သာ ပြည်တည်ခြင်းကြောင့် ယင်း ပြည်ဖုကို ခွဲကြောင်းပေးကာ ပြည်ကို ထုတ်ပြီး ကုသရပါမည်။ လိုအပ်ပါက ယင်းပြည်ဖု အထဲသို့ ရာဘာပိုက်အသေးလေး ထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂွမ်းစများ ထည့်ပြီး ပြည်စီးဆင်းမှု့ ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ပိုးကင်းစင်သော ရေဖြင့် အနာအတွင်းထိ ပြည်များ စင်နိုင်သမျှ စင်အောင် ဆေးကြောပါလိမ့်မည်။ ဤရောဂါ အခြေအနေတွင်မူ ပိုးသတ်ဆေး သေချာပေါက် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် အိမ်တွင် ဆရာဝန်ညွှန်းကြားသည့်အတိုင်း အတိအကျလိုက်နာ၍ အနာဆေး ထည့်ရန် လိုအပ်ပါမည်။
Herpetic whitlow။ acyclovir (Zovirax) တို့ ကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်သေဆေးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု့ ကြာချိန်ကို လျော့ချနိုင်ပေလိမ့်မည်။ အနာသက်သာဆေးများ၊ အနာကျက်ဆေးများလည်း တစ်ခါတစ်ရံ လိုအပ်ပါမည်။ ဤရောဂါတွင်မှု အနာကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်ခြင်းက အနာကျက်နှုန်းနှေးစေခြင်း၊ အခြားအစိတ် အပိုင်းနှင့် အခြားသူများကို ကူစက်နိုင်ခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးများပါ ကူးစက်စေပြီး ရောဂါကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် အနာကိုမခွဲစိတ် သင့်ပါ။
အရွတ်နှင့် အဆစ်များ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း။ ဤရောဂါသည် အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ရန် လိုအပ်သည့် ရောဂါဖြစ်ပြီး အချိန်မှိ ခွဲစိတ်ကုသမှု့ ခံယူရန်၊ ဆေးရုံတက်ရန်၊ ပိုးသတ်ဆေး ထိုးဆေးဖြင့် ကုသရန်လိုအပ်ပါမည်။ အနာကို ခွဲစိတ်ရာတွင် ပြည်များ၊ မကောင်းသော အသားစများကို ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ပြီး လက်၏ရှုပ်ထွေးသော အတွင်းသား ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် လိုအပ်ပါက လက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှု့ အထူးကု ဆရာဝန်မှ ခွဲစိတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ပြီးပါကလည်း ပိုးသတ်ဆေး ထိုးဆေး၊ သောက်ဆေးများ ရက်ရှည် ထိုးရန်၊ သောက်ရန် လိုအပ်ပါမည်။
လက်ချောင်း အတွင်းဆုံးလွာများထိ ပိုးဝင်ခြင်း။ အရွတ်နှင့် အဆစ်များ ပိုးဝင် ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့ပင် အရေးပေါ်ကုသမှု့များလိုအပ်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေး သောက်ဆေးများ ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပို၍ိဆိုးသော အခြေအေနေတွင်မူ လက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှု့ အထူးကုမှ ကုသမှု့ပေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို ထိုးဆေးများ ပေးရန် လိုအပ်ပါမည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ အိမ်သုံးကုထုံးတွေ အသုံးပြုခြင်းက လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းကို ကုသရာမှာ ဘယ်လို အထောက်အကူ ပြုနိုင်မလဲ။
လက်ချောင်းလေးများ ပိုးဝင်ခြင်းသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်သောကြောင့် မိမိဘာသာ အိမ်တွင် ကုသမှု့ပေးနေခြင်းကို သတိထားသင့်ပါသည်။ မပြင်း ထန်သော လက်စွယ်ငုတ်ခြင်းတွင်ပင် ဆီးချိုရောဂါ ကဲ့သို့ အခြားရောဂါများ မရှိမှသာ အိမ်တွင်းကုသမှု့ ပေးသင့်ပါသည်။ အခြားရောဂါ အခြေအနေများ အတွက်မှု ဆရာဝန်မှ အရေးပေါ် အခြေအနေ ဟုတ်မဟုတ်ခွဲခြားရန်လိုအပ်ပြီး အရေးပေါ်ကို အချိန်မှိ ကုသမှု့ မပေးနိုင်ပါက လက်ချောင်းလေးများ ဆုံးရှုံးရ ခြင်းနှင့် မသန်စွမ်းတော့ခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
လက်စွယ်ငုတ်ခြင်းအတွက် သက်သာရန် ရေနွေးစိမ်ပေးခြင်းနှင့် လက်ကို မြောက်ထားခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီး အနာသက်သာစေရန်နှင့် အနာနေ ရာကို ချောမွေ့စေရန် Epsom ဆားကို ရေဖျော၍ လက်ကိုစိမ် ပေးနိုင် သောလည်း ပိုးသတ်နိုင်ရန် အထောက်အကူ မပြုနိုင်ပါ။
ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို အသုံးပြုခြင်းကလည်း ဘက်တီးရီးယားပိုးနှင့် မှိုပိုးသေစေနိုင်သော အာနိသင် ရှိပြီး အိမ်တွင် အလွယ်တကူရရှိနိုင်သော အရည် ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးလည်း သင့်တော်သော အိမ်သုံး ဆေးဝါးများအတွက် အကူအညီ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သင့်ပါတယ်။
Finger Injuries. https://www.emedicinehealth.com/finger_injuries/. Accessed October 25, 2017.
Finger Injuries and Disorders. https://medlineplus.gov/fingerinjuriesanddisorders.html. Accessed October 25, 2017.